IMelika inxusa izingxoxo ezisheshayo ngodlame lwase-Ethiopia - Bayede News
Yamukelwe ngezindlela ezehlukile eyokwehliselwa esigabeni sesibili
Izwe i-USA likhathazeke kakhulu ngokulwa ezingxenyeni ezithile zase- Ethiopia, kusho uMnyango Wezwe wase-USA ngoLwesihlanu, unxenxa uHulumeni wase-Ethiopia namasosha ahlubukayo esifundeni saseTigray ukuthi baqale izingxoxo ngokushesha zokubhekana nalolu dweshu olukhungethe lelizwe.
“Sinxusa uHulumeni wase-Ethiopia kanye neTPLF ukuthi bangene ezingxoxweni ngaphandle kwezimo ezibekiwe mayelana nokunqandwa kokulwa,” kusho okhulumela uMnyango WoMbuso uNed Price esitatimendeni, esebenzisa isichasiso seTigray People’s Liberation Front. Imibiko yokuqhubeka nokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kanye nokuhlukunyezwa kwabantu abathintekayo kule mpi kushaqisa kakhulu, kuhlanganisa nokuhlaselwa okubikwa kwezakhamizi esigodini esisesifundeni i-Amhara kuleli sonto, kusho uPrice.
Amasosha avukelayo avela esifundeni iTigray abulale izakhamuzi ezili-120 ezinsukwini ezimbili esigodini esisesifundeni i-Amhara e-Ethiopia, kusho izikhulu zendawo zitshela abezindaba ngoLwesithathu.
Amabutho aseTigray ngokuhamba kwesikhathi akhiphe isitatimende enqaba lokho abakubiza ngokuthi “yizinsolo ezingamanga” nguHulumeni Wesifunda sase-Amhara futhi aphika ukuthi kukhona okubandakanyekayo ekubulaweni kwabantu.
“Siyakugxeka konke lokhu kuhlukunyezwa kwabantu futhi sinxusa bonke abathintekayo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu futhi bahambisane nezibopho zabo ngaphansi komthetho wamazwe omhlaba,” kusho uPrice.
Akuzange kube khona ukuphawula ngokushesha okuvela ehhovisi likaNdunankulu wase-Ethiopia. Okhulumela uHulumeni wesifunda sase- Amhara noGetachew Reda, okhulumela umbutho wamabutho aseTigray, akazange aphendule ngokushesha lapho kucelwa ukuthi kuphawulwe ngalolu daba.
UNgqongqoshe Wezokwaziswa e-Eritrea, uYemane Gebremeskel uthe: “I-Eritrea iziphika ngokusobala lezi zinsolo ezivela ngezikhathi ezithile. Ukusibhixa ngobubende inyama singayidlanga siyi-Eritrea akwakhi futhi ngeke kusebenzele la mazwe ukuthi athole ukuthula nokuzinza esifundeni” Impi yaqubuka ezinyangeni ezili-10 ezedlule phakathi kwamasosha ombuso wase-Ethiopia namabutho athembekile kuTPLF, alawula isifunda saseTigray. Kusukela lapho, izinkulungwane zibulewe futhi abangaphezu kwezigidi ezimbili babalekele amakhaya abo. Ukulwa kwasabalala ngoNtulikazi kusuka esifundeni saseTigray kuya ezifundeni ezingomakhelwane zase-Amhara nase-Afar, nazo ezisenyakatho yezwe.
I-United Nations ngoLwesihlanu ithe isiqedile uphenyo lwayo ngokuhlanganyela neKhomishini yamalungelo abantu ebekwe nguHulumeni wase-Ethiopia yokuhlukumeza engxabanweni yaseTigray, ngombiko wokugcina okumele ukhishwe ngoLwezi.
Anathi Mtaka Sep 17, 2021